Waa maxay dembigu , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Dembigu waa sharci-darro, oo waddan ka soo horjeedaa Ilaahay. Laga soo bilaabo wakhtigii dembigu dunidan yimid Aadan iyo Xaawo, ninku wuxuu ku hoos jiray harqoodkii dembiga - harqood la saari karo oo keliya nimcada Ilaah ee loo maro Ciise Masiix. Xaaladda dembiga ee bini-aadamku waxay muujisaa isu soo jiidashada inay nafta iska saarto iyo waxa ay danaha gaarka ah ka sareyso Ilaah iyo doonistiisa. Dembigu wuxuu horseed u yahay ka fogaanta Ilaah iyo silica iyo dhimashada. Sababta oo ah dadka oo dhami waa dambiilayaal, dhammaantoodna waxay u baahan yihiin madaxfurasho uu Ilaah ku bixiyo wiilkiisa (1 Yooxanaa 3,4: 5,12; Rooma 7,24:25; 7,21: 23-5,19; Markos 21: 6,23-3,23; Galatiya 24: XNUMX- XNUMX) XNUMX; Rooma XNUMX; XNUMX-XNUMX).
Aasaaska dhaqanka Masiixiyiintu waa aaminaad iyo jacayl daacad u ah Badbaadiyeheenna, kan ina jeclaaday oo nafteenna isu bixiyey. Aaminta Ciise Masiix waxaa lagu muujiyey rumaynta injiilka iyo shaqooyinka jacaylka. Ruuxa Quduuska ah, Masiixu wuxuu u rogayaa qalbiyada rumaystayaasha wuxuuna u oggolaanayaa inay midho dhalaan: jacayl, farxad, nabad, aaminin, samir, naxariis, roonaan, is-xakameyn, caddaalad iyo run (1 Yooxanaa 3,23: 24-4,20; 21: 2-5,15) ; 5,6.22 Korintos 23:5,9; Galatiya XNUMX: XNUMX-XNUMX-XNUMX; Efesos XNUMX).
Dembigu waa ka gees Ilaah.
Sabuurradii 51,6: 2, Daa'uud oo toobad keena wuxuu Ilaah ku yidhi: "Waxaan kugu dembaabay adiga keligaa oo wax baan hortaada ku xumeeyey." In kasta oo dadka kale si xun u saameeyeen dembigii Daa'uud, dembiga ruuxiga ah kama soo horjeedin - waxay ka ahayd Ilaah. David dib ayuu ugu celinayaa fikirkaan waa 12,13 Samuu'eel 7,20:XNUMX. Ayuub wuxuu weydiinayaa su’aasha: “Dembi maxaan ku sameeyaa adiga, aadanahayow” (Hi XNUMX:XNUMX)?
Dabcan, markaan dhaawacno dadka kale, waxay la mid tahay inaan ku dembaabno. Bawlos wuxuu tilmaamay inaan dhab ahaantii "ku dembaabnay Masiixa" (1 Korintos 8,12:XNUMX), kaasoo ah Sayid iyo Ilaah.
Tani waxay leedahay saameyn muhiim ah
Marka hore, maadaama Masiixu yahay waxyiga Ilaah ee dembiga loo jeediyo, dembiga waa in loo eegaa Masiixi ahaan, taasi waa, aragtida Ciise Masiix. Mararka qaar dembiga waxaa lagu qeexaa taariikh ahaan (si kale haddii loo dhigo, maxaa yeelay Axdiga Hore waxaa hore loo qoray, wuxuu mudnaanta siiyaa qeexitaanka dembiga iyo cilmiga kale). Si kastaba ha noqotee, waa fikirka Masiixa ee loo tixgelinayo Masiixiyiinta.
Midda labaad, maadaama dembigu yahay wax ka soo horjeedda wax kasta oo Ilaah ah, ma filan karno in Ilaah aanu dan ka lahayn ama dan ka lahayn. Maaddaama dembigu yahay mid ka soo horjeedda jacaylka Ilaah iyo naxariistiisa, waxay maskaxdeena iyo qalbiyadeenna ka fogeysaa Ilaah (Ishac 59,2: 1,19), oo ah asalka jiritaankeenna. Laheyn allabari Masiixa oo ah dib-u-heshiisiinta (Kolosay 21: 6,23-5,6), ma lihin rajo wax aan ahayn dhimasho mooyee (Rooma XNUMX:XNUMX). Ilaah wuxuu rabaa dadka inay yeeshaan is wehel jacayl iyo farxad ay wada yeeshaan isla markaana is jeclaadaan. Dembigu wuxuu baabi'iyaa bulshada jecel iyo farxadda. Sidaa darteed Ilaah waa neceb yahay dambiga oo wuu baabi'in doonaa. Jawaabta Ilaah ee dembigu waa cadho (Efesos XNUMX: XNUMX). Cadhada Ilaah waa go'aankiisa wanaagsan iyo tabaha xoogga leh ee baabi'inta dembiga iyo wixii ka dambeeya. Ma aha sababta oo ah inuu yahay mid qadhaadh oo aargudanaya sida innagoo kale bini-aadamka, laakiin wuxuu u jecel yahay dadka sidaa darteed isagu ma sugi doono oo ma daawan doono sida ay naftooda iyo kuwa kaleba u halligo dembiga.
Saddexaad, Eebbe keligiis ayaa noo xukumi kara arrintan, oo kaliya Is cafin kara dembiga maxaa yeelay dembigu kaligiis waa ka gees Ilaah. But Lord our But with But with But But But,, But But But But But But But But But But Laakiin Rabbiyow, Ilaahayagow, naxariis iyo dembi dhaafid baa leh, Sababta oo ah waxaan noqonay caasiyiin (Daan 9,9). "Waayo, xagga Rabbiga waxaa la jirta nimco iyo furasho badan" (Sabuurka 130,7: 1). Kuwa aqbala xukunka naxariis ee Eebbe iyo cafiska dembiyadooda "looma qorshaysan inay xanaaqaan, laakiin waxay ku helaan badbaadada xagga Rabbigeenna Ciise Masiix" (5,9Th XNUMX).
In kasta oo ay caado u ahayd in Shayddaan lagu eedeeyo mas'uuliyadda xaqiiqada ah in dembigu dunida yimid, aadanaha ayaa mas'uul ka ah dembigiisa gaarka ah. "Xaqiiqada ah in dembigu dunidan ku soo degay nin, dhimashana xagga dembiga, dhimashadu waxay gaadhay dadka oo dhan maxaa yeelay kulligood way wada dembaabeen" (Rooma 5,12:XNUMX).
In kasta oo Shaydaan tijaabiyay, Aadan iyo Xaawa waxay go'aankii gaareen - mas'uuliyadda iyaga ayaa iska leh. Sabuurradii 51,1: 4-XNUMX, Daa'uud wuxuu sheegayaa xaqiiqada inuu u nugul yahay dembiga maxaa yeelay wuxuu ku dhashay aadanaha. Wuxuu kaloo aqoonsadaa dembiyadiisa iyo caddaalad darrooyinkiisa.
Kulligeen waxaan ku silcinaa cawaaqibka wadareed ee dembiyada kuwa inaga horeeyey ku noolaa ilaa xad ay u qaabeeyeen adduunkeena iyo deegaankeenna. Si kastaba ha noqotee, tani micnaheedu maahan inaan ka dhaxalnay dambigeenna iyaga iyo inay iyagu mas'uul ka yihiin si uun.
Waqtigii nebi Yexesqeel waxaa jiray dood ku saabsan eedaynta dembiga shaqsiyeed "dembiyada aabayaasha". Akhri Yexesqeel 18 oo fiiro gaar ah u yeelo gabagabada aayadda 20: "Kuwa dembaaba waa inay dhintaan". Si kale haddii loo dhigo, qof walba ayaa mas'uul ka ah dembiyadooda.
Sababta oo ah waxaan leenahay masuuliyadeena shaqsiyadeed ee dembiyadeena gaarka ah iyo xaaladdeena ruuxiga ah, tawbadkeenku marwalba waa shakhsi. Dhammaanteen waan dembaabnay (Rooma 3,23:1; 1,8 Yooxanaa 1,15: 2,38) oo Qorniinku wuxuu qof kasta oo inaga mid ahi ku boorinayaa in aan toobadkeenno oo injiilka rumayno (Markos XNUMX; Fal XNUMX).
Bawlos wuxuu u qaatay xanuuno badan si uu u tilmamo in sida dembigu dunida u yimid qof ahaan, badbaadada waxaa kaliya laga heli karaa qof, Ciise Masiix. "... Maxaa yeelay, markii qaar badani ku dhinteen dembiga mid keliya, intee in ka badan ayaa nimcadii Ilaah lagu siiyey kuwa badan oo nimcadii nin Ciise Masiix ah" (Rooma 5,15, sidoo kale eeg aayadaha 17-19). Dambiga dhaafa dembiga annaga ayaa leh, laakiin nimcada badbaadada waa Masiixa.
Daraasadda ereyada loo isticmaalo in lagu qeexo dembiga
Erayo kala duwan oo Cibraani iyo Gariig ah ayaa loo isticmaalay in lagu qeexo dembiga, erey walbana wuxuu ku daraa qayb dhammaystir u ah qeexitaanka dembiga. Daraasad qoto dheer oo lagu sameeyo ereyadan ayaa laga heli karaa encyclopedias, faallooyinka, iyo aalladaha barashada Kitaabka. Erayada badankood la adeegsaday waxay ku jiraan dabeecad qalbiga iyo maskaxda.
Erayada Cibraani ee inta badan la adeegsado, fikirka dembigu waa ku guul darreysiga in la gaaro hadafka (Bilowgii 1; 20,9Mo 2; 32,21 Boqorada 2; Ps 17,21, iwm); Dembigu wuxuu la xiriiraa jabitaanka xiriirka, sidaa darteed caasinimo (xadgudub, fallaago sida lagu sharxay 40,5 Sam 1:24,11; Is 1,28:42,24; 2:24,17, iwm); Wax qalloocan u jeesta, oo si shar ah wax uga leexiya wixii loo qastiyey (oo sharnimadii sidii 9,5Sam 106,6:38,4; Dan 1,4; Sabuurada 2,22 iwm); qalad iyo khalad darteed (waa mid aad looga xumaado Sabuurrada 6,24; Isha 28,7; Jer 5); marin habaabin iyo ka qalitaan waddo (eeg Balooc ku yaal Hi 26,6:24,1; Ishacyaah XNUMX: XNUMX, iwm.); Dembigu wuxuu la xiriiraa waxyeeleynta dadka kale (shar iyo xumaan-ku xusan Sharciga Kunoqoshadiisa XNUMX; Maahmaahyadii XNUMX., Etc.)
Erayada Giriigga ee lagu adeegsaday Axdiga Cusub waa ereyo laxiriira ujeedkii laga waayey (Yooxanaa 8,46:1; 15,56 Korintos 3,13:1,5; Cibraaniyada 1:1,7; Jak 2,1; 2,13 Yooxanaa 4,15 iwm) ); qalad ama khalad (xadgudubyada ku jira Efesos 2,2: 1,18; Kolosay 2,12:15, iwm); goortaad goynayso xuduudo xaddidan (xadgudubyada kujira Rom 7,23:24,12; Cibraan 2 iwm); ficillo ka dhan ah Ilaah (shar ka ah Rooma 6,14:1; Tit 3,4:XNUMX; Jud XNUMX iwm); iyo sharci darada (cadaalad darida iyo xad gudubka Mt XNUMX; XNUMX; XNUMX Korintos XNUMX; XNUMXYoh XNUMX, iwm).
Axdiga Cusubi wuxuu ku darayaa cabbir dheeri ah. Dembigu waa ku guul darreysiga inuu ka faa iidaysto fursad uu ku dhaqmo dabeecadda rabbaaniga ah ee dadka kale (Jak 4,17:14,23). Intaa waxaa sii dheer, "waxa aan rumaysadka ka imaanaynin waa dembi" (Rooma XNUMX:XNUMX)
Dembiga aragtida Ciise
Barashada ereyga ayaa caawisa, laakiin nama hogaamineyso fahamka dembiga oo keliya. Sidii hore loo sheegay, waa inaan eegnaa dembiga aragtida Masiixiyiinta, taasi waa, aragtida wiilka Ilaah. Ciise waa suuradda dhabta ah ee qalbiga aabaha (Cibraaniyada 1,3: 17,5) oo Aabbuhu wuxuu noo sheegayaa: "Waa inaad maqashaa!" (Mt XNUMX: XNUMX).
Daraasadaha 3 iyo 4 waxay sharraxeen inuu Ciise yahay binu-aadam oo ereyadiisuna waa ereyada nolosha. Waxa uu leeyahay ma aha oo keliya ka tarjumeysa maskaxda aabbaha, laakiin sidoo kale waxay la timaadaa isaga anshax iyo anshaxa Ilaah.
Dembigu maahan ficil ka dhan ah Ilaah - waa ka sii badan yahay. Ciise wuxuu sharxay in dembigu ka yimaad qalbiga dembiga iyo maskaxda aadanaha. Sababta oo ah waxa gudaha ka soo baxa dadka qalbiyada fikradaha xun, sinada, xatooyada, dilida, sinada, hunguri xumada, xaasidnimada, xumaanta, ciilnimada, cayda, kibirka, isla weynida, caqli xumada. Waxyaalahan shar leh oo dhammu gudahay ka soo baxaan oo dadka nijaaseeyaan ”(Mk 7,21-23).
Waxaan qalad samaynaa markaan raadineyno liis gaar ah, liis go'an oo ah waxa la sameeyo iyo waxyaabaha la sameeyo. Maaha ficil shaqsiyadeed oo aad u badan, laakiin waa dabeecad hoosaadka qalbiga ee aan ku fahmi karno doonista Ilaah. Sikastaba ha ahaatee, qoraalka kor ku xusan ee ka yimid Injiilka Markos wuxuu ka mid yahay meela badan oo ciise ama rasuulkiisa ku liisgareeyaan ama isbarbar dhigaya dhaqamada dembiga iyo muujinta iimaanka. Waxaan ka helnaa Qorniinka noocaas ah ee Matayos 5; Matayos 7: 25,31-46; 1 Korintos 13,4: 8-5,19; Galatiya 26-3; Kolosay 10,34, iwm. Ciise wuxuu ku sharaxay dembiga inuu yahay dabeecad qabatin ah wuxuuna xusey: “ku alla kii dembaabaa waa addoonsiga dembiga” (Yooxanaa XNUMX:XNUMX).
Dembigu wuxuu ka gudbaa dariiqooyinka dabeecada rabbaaniga ah ee dadka kale. Waxay u dhaqmeysaa sidii inaanan mas'uul ka aheyn awood sare oo inaga sarreysa. Masiixiyiinta, dembigu waa inaanan u oggolaan Ciise inuu dadka kale inaga jeclaado, maanaan ixtiraamno waxa uu Yacquub ugu yeerayo "cibaado daahir ah oo cibaado leh" (Jak 1,27:2,8) iyo "sharciga boqornimada sida ku qoran Qorniinka" (Jak 14,15). Ciise wuxuu sharxay in kuwa isaga jecel ay addeeci doonaan ereyadiisa (Yooxanaa 7,24:XNUMX; Mt XNUMX) sidaas darteedna ay fulinayaan sharciga Masiixa.
Mawduuca dembigeenna dembiga ah wuxuu dhex marayaa dhammaan Qorniinka (eeg Bilowgii 1; 6,5; Saadaalinta 8,21; Jer 9,3; Rooma 17,9:1,21, iwm). Sidaa daraadeed Ilaahay wuxuu ina farayaa: "iska tuur xadgudbyadii aad gashay oo dhan, oo waxaad yeeshaa qalbi cusub iyo ruux cusub" (Yexesqeel 18,31:XNUMX).
Markii aan Wiilkiisa u soo diro qalbiyadeenna, waxaynu helnaa qalbi cusub iyo ruux cusub, innagoo qiraya inaannu iska Ilaah nahay (Gal 4,6: 7,6; Rooma 6,6: 3,3). Maaddaama aan nahay kuwa Ilaah, waa inaanu mar dambe noqon “addoommo dembi loo noqdo” (Rooma XNUMX: XNUMX), yaannaan “noqon wax aan la fahmin, caasiyiin, marin habaabin, yaannaan mar dambe u adeegin damacyada iyo damacyada, mar dambe xumaan iyo xaasidnimo noolaada, oo yaan laydin necbaanin oo midkiinba midka kale ha necbaadayo (Tiitos XNUMX: XNUMX).
Macnaha guud ee dembiga ugu horeeya ee Bilowgii ayaa inaga caawin kara. Aadan iyo Xaawo waxay ku wadaageen Aabaha oo dembigu wuxuu dhacay markii ay jabiyeen xiriirkaas iyaga oo fiiro gaar ah u leh cod ka duwan (Akhri Bilowgii 1-1).
Ujeeddada dembigu lumo waa qiimaha guusha ee yeedhista jannada ee Masiixi Ciise (Filiboy 3,14:1) iyo in innagoo qaadanaya bulshada aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah, laguugu yeedhi karo carruurta Ilaah (3,1 Yooxanaa XNUMX) , XNUMX). Hadaan ka guurno beeshan iyadoo ilaahnimada ah, waxaan hilmaamaynaa hadafka.
Ciise wuxuu ku nool yahay qalbiyadeenna si aan “uga wada buuxsanno Ilaah buuxnaanta oo dhan” (eeg Efesos 3,17: 19-5,32), iyo jabinta xiriirkan dhammaystirka ah waa dembiga. Markaan dembaabno, waxaan caasinnay wax kasta oo Ilaah yahay. Waxay abuurtaa khilaaf ka dhex dhaca cilaaqaadka xurmada leh ee ciise la nooumay ka hor aasaaskii aduunyada. Waa diidmo in Ruuxa Quduuska ahi inagu dhex shaqeeyo si aan u yeelno doonista Aabbaha. Ciise wuxuu u yimid inuu u yeero dembilayaasha inay toobad keenaan (Luukos XNUMX:XNUMX), taasi waa, inuu ku laabto xiriirkii Ilaah iyo doonistiisa xagga aadanaha.
Dembigu micnaheedu waa inuu qaato wax la yaab leh oo Ilaah ugu talo galay quduusnimadiisa iyo inuu uga leexdo dadka kale damacyada is-jecel. Waxay ka dhigan tahay ka leexasho ulajeeddadii Ilaah ee loogu talo galay aadanaha inuu ku soo daro qof kasta noloshooda.
Dembigu sidoo kale macnihiisu waa inaanan dhigin iimaankeena xagga Ciise inuu yahay hogaamiyaha iyo awooda nolosheena ruuxiga ah. Dembigu mid ruuxi ah laguma qeexay caqliga aadanaha ama mala awaal, laakiin waa Ilaah. Haddii aan rabno inaan yeelano qeexitaan gaaban, waxaan dhihi karnaa dembigu waa gobolka nolosha iyadoo aan la noolaan Masiixa.
Masiixiyiintu waa inay ka fogaadaan dembiga maxaa yeelay dembigu waa biririf ku haysa cilaaqaadka aan la leenahay Ilaah kaas oo inaga fogeeya wada noolaanshaha aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah.